Degmada Dhahar oo u gudubtay wareegga Afar dhammaadka tartan Cilmiyeedka | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Degmada Dhahar oo u gudubtay wareegga Afar dhammaadka tartan Cilmiyeedka
Degmada Dhahar oo u gudubtay wareegga Afar dhammaadka tartan Cilmiyeedka
Habeenka 24-aad tartan cilmiyeedka warbaahinta Qaranka ee uu maamulka gobolka Benaadir taabagelinayo, waxaa ku tartamay caawa degmooyinka Dhahar ee gobolka Sanaag iyo Yaaqshiid oo ka tirsan gobolka Benaadir.
Tartamayaasha labada degmo waxa ay soo bandhigeen qeybtii hore tartan xiiso badan oo lagu weydiiyey afar su’aal degma walba, waxaana loo gudbiyey qeybta labaad ee tartan cilmiyeedka Afar dhammaad ee Warbaahinta Qaranka.
Degmada Yaaqshiid ee gobolka Benaadir, waxaa la weydiiyey toddoba su’aal waxa ay si sax ah uga jawaabbeen hal su’aal lixda kalena waa ay qaldeen, waxa ay uruursadeen Yaaqshiid laba dhibcood (2 dhibcood).
Degmada Dhahar ee gobolka Sanaag waxaa iyaguna la weydiiyey toddoba su’aal waxa ay si sax ah uga jawaabbeen Saddex, waxa ay iska qaldeen afar, iyagoo si ka faa’ideysi ah uga jawaabbay laba su’aal oo Yaaqshiid oo hareermartay, waxa ay heleen Toban dhibcood ( 10 dhibcood), degmada Dhahar ayaa u gudubtay wareegga Afar dhammaadka tartan cilmiyeedka Warbaahinta Qaranka.
Sidoo kale caawa waxaa jira tartan labaad oo dhexmari doonaa degmooyinka Shibis iyo C/casiis oo ka wada tirsan.
Caawa tartan kale C/casiis Vs Shibis
Previous articleWasiirka Dastuurka oo la kulmay guddiga madaxa-bannaan ee doorashooyinka Qaranka
Next articleDegmada Shibis oo u gudubtay wareegga Afar dhammaadka tartan cilmiyeedka